Njem njem nlegharị anya Polish na-elekwasị anya EU, USA na Asia na mgbasa ozi PLN 50
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ mkpakọrịta » Njem njem nlegharị anya Polish na-elekwasị anya EU, USA na Asia na mgbasa ozi PLN 50
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa ozi Poland • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Polish Tourism Organisation (PTO) kwuputara na mba European Union, United States na mba Eshia bụ isi ahịa, ebe ọ ga-akwalite Poland na 2019. PTO kwuru na ọ ga-elekwasị anya n'ịkwalite Poland site na netwọkụ mmekọrịta.
Onye isi ala ya, Robert Andrzejczyk, na N'ajụjụ ọnụ a na nso nso a, kwuru na pasent 75 nke ndị njem si mba ọzọ na-abịa Poland bụ ụmụ amaala nke European Union. Otú ọ dị, ọ na-ahụ na nzukọ ahụ ga-arụkwa ọrụ n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa. Onye isi ala Andrzej Andrzejczyk rụtụrụ aka na mba ndị Eshia nke Poland nwere njikọ ikuku kpọmkwem - gụnyere Japan, South Korea na China. Na mgbakwunye, Polish Tourist Organisation ga-ahazi omume a ga-agwa ndị Poland bi na United States. N'ime ihe mgbaru ọsọ dị mkpa nke mkpọsa nke afọ a, Onye isi oche PTO kwukwara Israel. Robert Andrzejczyk kwuru, sị: “Nke a bụ ahịa na-eto ngwa ngwa maka ndị si mba ọzọ na-abịa Poland.
N'oge opupu ihe ubi, PTO ga-aga n'ihu na mgbasa ozi "#Visit Poland". Dịka akụkụ ya, a ga-akpọ ndị njem-ndị na-ede blọgụ a ma ama na Poland, ndị ga-akwalite oge ezumike na mba anyị site na mmekọrịta dị n'ịntanetị. N'afọ a, a ga-ebute mgbasa ozi na ndị ọrụ Instagram. “Foto ndị dị na, obere okwu tinyere isi nri. Nri, bụ ihe anyị chọrọ itinye na 2019 na Instagram bụ nnukwu ngwaọrụ maka nke a “- Robert Andrzejczyk kwuru.
Tù Polish Tourist Organisation ga-esonyekwa na mmemme ndị njem nlegharị anya gburugburu ụwa. Ọ kwadebere nguzo mba ọhụrụ, nke a ga-eme ka ọ pụta ìhè na March n'oge ngosi ngosi njem nleta na Berlin. Na mgbakwunye, PTO ga-akpọ ndị na-ese ihe nkiri si n’akụkụ ụwa niile ka ha bịa Poland ma gbaa ha ume ka ha rụpụta nnukwu ihe na mbara ikuku dị na Poland.
Na 2018, nde mmadụ iri na itoolu si mba ọzọ bịara Poland. N'afọ a, dịka atụmatụ nke Ministry of Sport and Tourism and POT si kwuo, ọnụ ọgụgụ ha nwere ike ịkarị nde 19. Mkpokọta POT mmefu ego maka ịkwalite Poland ná mba ọzọ afọ a bụ PLN 20 nde.
mmefu ego mkpọsa ụmụ amaala abịa comments njikọ esi nri nri ezumike kpọmkwem EU European European Union ngosi emume mba ọzọ mbata mba ofesi ndị njem nleta si mba ọzọ ahịa na-eto eto Interview Israel Japan Korea Oge ntụrụndụ ọnọdụ njem ahịa ozi netwọk online nzukọ soro pasent foto Poland Polish ewu ewu Pot Kwalite nkwalite -adịbeghị anya mmekọahụ Robert obere -elekọta mmadụ netwọk mmekọrịta South Korea egwuregwu mmiri na-ekwu, lekwasịrị anya European Union United States ngwá ọrụ otu United States USA